जनताबाट उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ? - Sidha News
जनताबाट उठेको पैसा खाने, विकास गर्न ऋण लिने ?
काठमाडौ। जति राजस्वको लक्ष्य छ, लगभग त्यति नै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो कर उठाएर खाएर सक्ने प्रवृत्ति हो । उठेको राजस्व चालु खर्चमा लगाउनु भनेको एकदमै खराब अभ्यास हो ।